Exchange Exchange: Inona no atao hoe Exit Intent? | Martech Zone
Exchange Exchange: Inona no atao hoe Exit Intent?
Zoma, Febroary 7, 2014 Alarobia, Febroary 24, 2016 Douglas Karr
Mety nahatsikaritra ianao tao amin'ny bilaoginay fa raha miala amin'ny pejy ny totozy ary mankany amin'ny bara adiresy (ary mbola tsy nisoratra anarana ianao) dia miseho ny tontonana famandrihana. Miasa mamirapiratra… ary nampitomboinay ny ezaka azon'ireo mpanjifa am-polony hatramin'ny zato isam-bolana. Fantatra amin'ny hoe fivoahana.
Exchange Exchange manana patanty Hivoaka-Fikasan'ny teknolojia mandinika ny fihetsiky ny totozy, ny hafainganam-pandehan'ny totozy, ny toerana misy ny totozy, na manimba ny fiaramanidin'ny tranokala na tsia ny hikajiana raha hiala ny tranokala na tsia.
Alohan'ny hahafahan'ny mpampiasa mandao ny tranokala dia miseho ny pane iray hisarika sy hitazonana ilay mpitsidika. Izany no atao hoe fikasana hivoahana ary tena mandaitra!
Tags: fandaozanafiaramanidina mpitety tranonkalaFivoahanafifanakalozana fivoahanafivoahanafihetsiky ny totozyhafainganam-pandeha totozy
Tsy fahombiazan'ny dokam-barotra amin'ny media sosialy
POP: ny fampiharana findainao ho an'ny prototyping amin'ny taratasy
21 Feb 2014 tamin'ny 9:09 maraina
Manontany tena aho hoe ahoana no nanampanan'izy ireo patanty zavatra misy farafaharatsiny nanomboka tamin'ny 2008 (naorina 2010 izy ireo). Manomboka amin'ny 18 septambra 2008 izany: http://www.warriorforum.com/main-internet-marketing-discussion-forum/13369-how-do-you-make-unblockable-exit-popup.html - avy amin'ilay lahatsoratra momba ny popup misy fikasana: “… Ny akaiky indrindra azonao dia ny fivezivezena eo akaikin'ny tampon-efijery ny cursoran'ny mpitsidika anao… ka heverinao fa hanidy ny bokotra akaiky izy ireo. Ity no fisintonana fivoahana tsy azo esorina: Action PopUp: PopUps azo sakanana ny saina rehefa miala amin'ny pejy ireo mpitsidika anao… ”.
Ho fanampin'izay, misy ity fehezan-dalàna ity manomboka ny 27 aprily 2012 izay mampihatra ny haitao «fivoahana-hevitra» amin'ny tsipika kaody 5, azon'ny besinimaro atao: http://stackoverflow.com/questions/10357744/how-can-i-detect-a-mouse-leaving-a-page-by-moving-up-to-the-address-bar
Nametraka ny datin'ny patanty azon'izy ireo ny 25 Okt 2012. Daty laharam-pahamehana araka ny Google dia 30 Apr 2012 (http://www.google.com/patents/US20130290117)
Fanovozan-kevitra iray hafa avy amin'ny quicksprout: http://www.quicksprout.com/forum/topic/bounce-exchange-alternative/ lahatsoratra: “Tamin'ny taona 2010 ScreenPopper.com dia noforonina tao ambadiky ny fiara mini-van tamin'ny dia lavitra naharitra 1.5 taona nanerana ny firenena satria tsy hitako izay nilako. Tsy nisy ny fifaninanana, tamin'izany fotoana izany no fanomezana tokana dia ny fanjakazakan'ny popup izay mafy loatra ka sarotra apetraka ». Roa taona lasa izay talohan'ny nametrahana ny «patanty».
Ho famaranana, ny Bounce Exchange dia mety manana vokatra tsara fa tsy noforonin'izy ireo ary tsy manan-jo amin'ny “teknolojia” izy ireo. Manontany tena aho hoe ahoana no tsy nahitan'ny mpisolovava azy ireo izay hitako afaka 5 minitra niaraka tamin'i Google. Ary tsy mpisolovava aho. Olona tsy tia fotsiny dia manandrana manao ampihimamba ny tsy azy. Maka 3000 $- $ 5000 ho azy ireo izy ireo ary tsy mila vahaolana hafa misy mora vidy kokoa (maninona ianao no mila "patanty"?)
21 Feb 2014 tamin'ny 11:55 maraina
Tsy namaky ilay patanty tena izy aho fa hiteny kosa fa ny patanty dia tsy midika hoe namorona zavatra ianao. Azonao atao ny manatsara ny paikady sy ny patanty fanatsarana izany.
21 Mey 2014 tamin'ny 12:46 hariva
Salama @douglaskarr: disqus - Novakiako ireo andalana faha-1 an'ny patanty sy ny abstract (ao amin'ilay rohy etsy ambony) ary ny tena fitakiana ny patanty dia ilay haitao «fivoahana-finiavana» ​​tanteraka. Nambaran'izy ireo fa izy ireo no namorona ny fanarahan-totozy noho io antony io. Ireo rohy izay nentiko dia mampiseho fa tsy noforonin'izy ireo mihitsy. Izay no tsy mety amin'ny hevitro. Ary mahasosotra ahy izany satria mieritreritra ny hanao script hivoahana aho, na hampiasa ny iray amin'ireo safidy hafa efa vonona (hitako 15 hafa farafahakeliny…). Raha ny patanty Bounce Exchange no ampiasain'izy ireo hanakanana, tsy ara-dalàna, ny fifaninanana dia mety handratra ireo tranonkala rehetra amin'izao fotoana izao izay mampiasa fomba hafa mora vidy; ary ny olona toa ahy saika hampiasa azy. Ankehitriny hitako ny lahatsoratrao dia manana eritreritra faha-2 aho. Tsy misy ny fandaniako vola an'arivony dolara isam-bolana amin'izany. Ary na dia tsy mendrika ny patanty aza izy ireo, dia mety hanao be dia be ho ahy raha ataoko izany, na mampiasa ny hafa.
Tato ho ato dia mahita popup toy izany aho na aiza na aiza. Raha tsy misy ny popup-fikasana mipoitra dia mila miverina amin'ny pops hafa manelingelina kokoa isika - pop-unders, pop-overs ara-potoana, popup-fidirana sns.
26 Nov 2015 tamin'ny 3:31 PM
Noho izany, hita fa i Retyp, ireo olona ao ambadiky ny Optin Monster dia nitory ny Bounce Exchange tamin'ity patanty ity. Saingy tsy ampy fahaizana momba ny lalàna aho raha te hahalala raha efa nilamina izany, ary raha izany, inona no vokany…? Fampahalalana bebe kokoa amin'ireto rohy ireto:
Azo antoka fa tsara ny hahafantatra ny zava-mitranga eto. Toa patanty tena adaladala ary tena tiako ho hita eo amin'ny toeran-kafa izany….
27 Nov 2015 tamin'ny 4:42 PM
Teyva mahavariana izany. Manaiky aho… akanjo manahirana.
30 Jun 2016 amin'ny 5:46 AM
Ny vokatra na serivisy izay amidin'i BounceX (sy BounceX / Yieldify dia serivisy feno toy ny vokatra iray) matetika dia misy singa maro. Tsy azo atao matetika ny manome patanty ny fizotrany rehetra, noho izany dia miaro ny fotony ianao (amin'ity tranga ity ny algo) satria io no ampahany lehibe indrindra. Azoko antoka fa misy patanty any hamoronana sary, mipoitra sary amin'ny tranokala sns izay tsy azy ireo ary manitsakitsaka ara-teknika azy ireo.
Tsara ny manamarika fa nividy patanty tamin'ny antoko fahatelo i Yieldify (voampanga amin'izany) ary mitory amin'ny BounceX ankehitriny. Raha manam-bola hanenjehana mpifaninana iray ianao dia tsy dia misy atahorana - raha very ny tranga dia eo amin'ny toerana mitovy ianao dia izao (ahena ny vola) fa raha mandresy ianao dia manamboatra sokay tsena fotsiny. zarao ho anao.